Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny gadona Junctional sy Idioventricular | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny gadona Junctional sy Idioventricular | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Hafa / Inona no maha samy hafa ny gadona Junctional sy Idioventricular
23 aogositra 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny gadona junctional sy idioventricular dia ny pacemaker an'ny gadona junctional dia ny node AV raha ny ventricle kosa no mpampifehy ny gadona idioventricular.
Ny node sinoatrial na SA node dia fitambarana sela (cluster of myocytes) miorina amin'ny rindrin'ny atrium havanan'ny fo. Amin'ny fomba mahomby, ny SA node dia tompon'andraikitra amin'ny hetsika elektrika ao am-po. Izy io no mpampandry tany voajanahary ao am-po. Ny tsindrona noforonin'ny node SA dia nahatonga ny atria roa nifanaraka ary nifoka rà ho lasa ventricle roa. Rehefa voasakana na ketraka ny SA, dia lasa mavitrika hitarika gadona ny mpanao pacemakers faharoa (AV node sy Bundle of His). Ny gadona junctional sy ventricular dia gadona roa toy izany. AV node dia miasa amin'ny maha mpampandry tany azy ary mamorona gadona mifangaro. Rehefa samy tsy mahavita gadona ny node SA sy ny node AV dia mihetsika ho toy ny pacemaker azy manokana ny ventricle ary mitondra gadona idioventricular.
2. Inona no atao hoe Rhythm Junctional
3. Inona no atao hoe Rhythm Idioventricular
4. Ireo fitoviana - Ritme Junctional sy Idioventricular
5. Rhythm Junctional vs Idioventricular amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Rhythm Junctional vs Idioventricular
Inona no atao hoe Rhythm Junctional?
Ny gadona junctional dia gadona tsy ara-dalàna izay manomboka mihetsika rehefa voasakana ny gadona Sinus. Ao amin'ny ECG, ny gadona junctional dia voamarina amin'ny onja tsy misy onja p na amin'ny onja p mivadika. Ny gadona junctional dia avy amin'ny faritra misy sela amin'ny atrioventricular node. Noho izany, AV node no mpampihomehy ny gadona ivoara. Noho ny gadona mifampitohy dia manomboka mifintina ny atria. Saingy tsy mitranga amin'ny fomba mahazatra. Mandritra ny gadona mifampitohy dia mitempo mandritra ny 40 - 60 ny minitra.
Sary 01: Rhythm Junctional
Misy karazany efatra ny gadona mifampitohy toy ny gadona mifampitohy, ny gadona mihetsiketsika mihombo, ny tachycardia mifampitohy ary ny bradycardia mifampitohy. Amin'ny gadona mihetsiketsika haingana, ny fitempon'ny fon'ny fo dia ho 60 - 100 kapoaka isa-minitra. Ao amin'ny tachycardia fihaonana, avo kokoa noho ny kapoka 100 isa-minitra izy, raha ao amin'ny bradycardia fihaonana kosa dia ambany noho ny kapoka 40 isa-minitra izy io.
Inona ny gadona Idioventricular?
Ny gadona Idioventricular dia gadona ventricular mahazatra miadana. Ny fo mitempo amin'ny taha latsaky ny 50 bpm. Izy io koa dia miavaka amin'ny tsy fisian'ny onja ap sy ny elanelam-potoana QRS maharitra. Ny gadona Idioventricular dia miteraka rehefa samy voahidy ny node SA sy ny AV node noho ny fahasimban'ny rafitra na ny asany. Ny Ventricles dia mihetsika ho mpampihomehy ary mitondra gadona. Ny gadona idioventricular haingam-pandeha dia karazana gadona idioventricular izay mandritry ny 50-110 bpm ny tahan'ny fo. Mandritra ny tachycardia ventricular, ECG amin'ny ankapobeny dia mampiseho tahan'ny mihoatra ny 120 bpm.
Sary 02: Rhythm Idioventricular
Ny gadona Idioventricular dia gadona tsara, ary tsy mila fitsaboana matetika izy io. Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny gadona idioventricular dia ny tsy fahatomombanan'ny fo rehefa teraka. Ny rongony koa dia mety hiteraka gadona idioventricular. Ny antony lehibe dia mety ho fanakanana fo mandroso na feno.
Inona avy ireo fitoviana eo amin'ny gadona Junctional sy Idioventricular?
Ny gadona fitambarana sy idioventricular dia gadona fo.
Miorina indrindra izy ireo rehefa voasakana ny gadona sinus.
Samy niandoha izy ireo satria misy mpampandry tany faharoa.
Ny gadona dia mahazatra amin'ny gadona roa.
Samy manana ny maha izy azy ny gadona roa.
Azon'izy ireo atao ny mamantatra izany amin'ny alàlan'ny ECG.
Ireo marary manana gadona sendra na idioventricular dia mety tsy miteraka asyptomatika.
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny gadona Junctional sy Idioventricular?
Ny gadona junctional dia gadona aretim-po tsy ara-dalàna ateraky ny fihevitry ny AV na ny fehiny. Ny gadona Idioventricular dia gadona aretim-po vokatry ny fiasan'ny ventricle ho mpandala ny tany. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny gadona junctional sy idioventricular. Ny gadona junctional dia mety tsy misy onja p na misy onja miolakolaka, raha tsy eo kosa ny onja p amin'ny gadona idioventricular.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ireo fahasamihafana misy eo amin'ny gadona junctional sy idioventricular amin'ny endrika tabilaoro ho an'ny fampitahana mifanila.
Famintinana - Rhythm Junctional vs Idioventricular
SA node no mpampihomehy voajanahary voajanahary ao am-pontsika ary miteraka gadona sinus. Ny gadona sinus dia gadonan'ny fitempon'ny fotsika. Ny gadona junctional sy idioventricular dia gadona aretim-po roa vokatry ny tsy fetezan'ny SA node na ny fisamborana gadona sinus. Samy mipoitra ireo noho ny fihinanam-bilona faharoa. AV node dia miasa ho toy ny mpampakarama mandritra ny gadona miharo, raha ny ventricle kosa dia mihetsika ho toy ny mpampakarama mandritra ny gadona idioventricular. Samy azo fantarina amin'ny ECG. Noho izany, ity no famintinana ny mahasamihafa ny gadona junctional sy idioventricular.
1. Gangwani, Manesh Kumar. " Rhythm Idioventricular ." StatPearls [Internet]., US National Library of Medicine, 7 apr. 2021.
2. Hafeez, Yamama. “ Rhythm Junctional .” StatPearls [Internet]., Tranombokim-pirenena amerikana momba ny fitsaboana, 19 Jolay 2021.
1. " Tachycardia Junctional " Nosoratan'i James Heilman, MD - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. “ Aivr (CardioNetworks ECGpedia) ” Nosoratan'i CardioNetworks:  - CardioNetworks: Aivr.jpg (CC BY-SA 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'i Hyena sy i Jackal Fahasamihafana eo amin'ny zoma mainty sy ny alatsinain'ny cyber Fahasamihafana eo amin'ny fianarana sy ny fahazoana Fahasamihafana eo amin'ny Pinnatifid sy Pinnatisect Fahasamihafana eo amin'i Anterograde sy Retrograde Amnesia
Fahasamihafana eo amin'ny Accrual sy ny Deferral
Fahasamihafana eo amin'ny tsaramaso sy ny tsaramaso
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Galaxy S3 sy LG Optimus 4X HD
Fahasamihafana eo amin'ny fanamby sy ny olana
Fahasamihafana eo amin'ny Catenation sy ny Allotropy